Wematanda Imbwa Brush, Pet Kombama, Pet Bvudzi Kubvisa Glove - Kudi
Suzhou Kudi Trade Co., ltd. ndeimwe yevanogadzira makuru maturu ekushambidza zvipfuyo uye inodzoserwa imbwa leashes muChina uye isu takave nyanzvi mune ino yakamisikidzwa kweanopfuura makore gumi nemapfumbamwe. Fekitori yedu yaive muSuzhou, inongova hafu yeawa nzira nechitima kubva kuShanghai Hongqiao Airport. Tine mafekitori maviri ayo anonyanya kushongedza maturusi uye imbwa dzinodzoserwa, makorari nematoyi epamba ane huwandu hwenzvimbo yekugadzira inopfuura 9000 metres ...
vanoda peturu musika
Tsika Inorema Duty Inodzoreka Imbwa Leash 1.Retractable traction tambo tambo yakafara yakatambanuka ribhoni. Dhizaini iyi inokutendera kuti utambanudzire tambo mushe mushe, izvo zvinogona kunyatso kudzivirira imbwa leash kubva kumhanyisa uye kuruka. Zvakare, dhizaini iyi inogona kuwedzera nzvimbo inotakura zvine simba patambo, kuita kuti tambo yekusungira iwedzere kuvimbika, uye kumira nesimba rakakura rekudhonza, zvichiita kuti mashandiro ako ave nyore uye zvinokubata iwe kuti uwedzere kugadzikana. 2.360 ° tangle-yemahara tsika inorema-basa inodzoserwa imbwa leash inogona ...
Kuzvishambidza wega Slicker Brush Kune Imbwa
Kuzvichenesa Inotsvedza Slicker Brush Yembwa 1.Iyi yega yekuchenesa inotsvedza bhurashi kune imbwa inogadzirwa nesimbi isina simbi, saka inogara yakasimba. 2.Iye yakanaka yakakotwa waya bristles pane yedu inotsvedza bhurasho rakagadzirirwa kuti ripinde zvakadzika mukati mejasi rako rechipfuwo pasina kukwenya ganda remhuka yako. 3.Iyo yekuzvishambidza yekuchenesa slicker bhurashi kune imbwa zvakare ichasiya chipfuwo chako neine nyoro uye inopenya jasi mushure mekushandisa uchidzizora nekuvandudza kutenderera kweropa. 4.Nekushandisa nguva dzose, iyi yekuzvishambidza yekuchenesa inotsvedza ...
Heavy Duty Retractable Imbwa Leash 1.The Heavy Duty Retractable Imbwa Leash's kesi inogadzirwa neyekutanga ABS + TPR zvinhu, kudzivirira kesi kutsemuka nekukanganisa kudonha. 2.Iyi inodzoserwa leash inotora ine yekufungidzira nylon tepi iyo inogona kuwedzera kusvika ku5M, saka ichave yakachengeteka zvakanyanya kana iwe uchishanda imbwa yako husiku. 3.Iyo Inorema Duty Inodzoreredza Imbwa Leash ine yakasimba chitubu kufamba kwekudzosa zvakanaka, kusvika makumi mashanu emazana nguva. Inokodzera imbwa hombe ine simba, iri pakati nepakati uye diki ...
Nei dzimwe imbwa dzakanyanya hyper kupfuura dzimwe?
Isu tinoona imbwa dzakatenderedza uye dzimwe dzadzo dzinoita sedzisina simba simba, nepo dzimwe dzakadzikiswa zvakanyanya. Vazhinji vabereki vechipfuwo vanokasira kudaidza imbwa yavo ine simba "kusagadzikana," Nei dzimwe imbwa dzakanyanya hyper kupfuura dzimwe? Kubereka hunhu Vafudzi veGerman, Border Collies, Goridhe Kudzosera, Si ...
Chinhu Chaunofanira Kuziva Nezve Imbwa Yako Paws
Kune zvipembenene zveziya mumakumbo embwa yako. Imbwa dzinoburitsa ziya pazvikamu zvemiviri yavo isina kuvharwa nehuswa, semhino uye mapedhi etsoka. Mukatikati meganda pagumbo rembwa mune gland gland - kutonhora imbwa inopisa pasi. Uye sevanhu, kana imbwa ichitya kana kushushikana, ...
Imbwa kurara zvinzvimbo
Wese muridzi wechipfuwo anoda kuziva zvakawanda pamusoro pembwa dzavo, nezve imbwa yavo inofarira nzvimbo yekurara. Idzo imbwa dzinovata mukati, uye iyo nguva yavanoshandisa kurara inogona kuratidza zvakawanda nezve manzwiro avanonzwa. Heano mamwe maitiro akajairwa ekurara uye zvavanogona kureva. Padivi ...
Tarisa Uye Nyanzvi,
Ita Kuti Upenyu Hwedu Huve Nani!
Suzhou Kudi Trade Co., Ltd. ndeimwe yevanogadzira maturusi ekushongedza maturusi muChina.
Iyo fekitori iri muWangshan Industry Park, Wuzhong District, Suzhou, China,
iyo inovhara zvinopfuura zviuru zvishanu zvemamirimita.